रोचक घर बनाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, सँधै लक्ष्मीको बास हुनेछ,
Nepal Online Patrika| Kathmandu: जीवनभर कमाइ खर्चगरेर निर्माण गरिने घरमा यदि सानाे विषयमा सावधानी अपनाउने हाे भने । सकारात्मक उर्जामा वृद्धि हुन्छ र उक्त भवनमा बसाेवास गर्ने मानिस हरुकाे आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक हिसाबले उन्नति तर्फ अगाडि बढाउदछ । घर निर्माण गर्दा जग्गाको बनावट,घरकाे माेहडाका साथै घरभित्र लगाईने कलर लगाएका विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने नियम वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घर निर्माणका क्रममा यी चार विषयमा सावधानी अपनाउन सकेमा वास्तुअनुसार नै गृह निर्माण पुराहुने वास्तुशास्त्री बताउँछन् ।
१ गृह निर्माणका क्रममा यदि दक्षिण पश्चिमी दिशा अर्थात नैरित्य काेणमा पर्ने गरि मेन ढाेका बनाउनु हुदैन । उक्त दिशामा मेनढाेका बनेकाे घरमा सकारात्मक उर्जा भन्दा नकारात्मक उर्जाधेरै हुनेहुदा सदैब उक्त घरमा पारिवारिक समस्या देखा परिरहन्छ । उक्त दिशा राहुकाे दिशा भएकाले मुद्दा मामिलामा परिने सम्भावना पनि रहिरहन्छ । वस्तुकाे नियम अनुसार नैरित्यकाे प्रवेश द्वार भनेकाे सात्क्षात कालकाे प्रवेशद्वार हाे भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
२ गृह निर्माणका क्रममा यदि उत्तर पूर्व अर्थात् ईशान काेणमा यदि ट्वाईलेट बनाएमा पनि वास्तुअनुसार एकदमै हानिकारक हुन्छ । यस्ताे दिशामा बनाईएकाे ट्वाईलेटका कारणले सदैब आर्थिक अभाव गराउदै जाने छ । लाेनकाे भार धेरै थपिनाले मानसिक तनाव पनि हुन्छ । किन कि उक्त दिशा धनका राजा कुवेर भएकाले उनकै दिशामा पर्ने गरिबनाईएकाे ट्वाईलेट सदैब धन तथा स्वस्थ्यमा समस्या दायक हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
३ गृह निर्माणका क्रममा यदि दक्षिण पश्चिम अर्थात् नैरित्य काेणमा पानिकाे बाेरिङ या ईनार अथबा रिजर्भ पानी ट्याङ्की या सेप्टिट्याङ्की बनाएकाे अवस्थामा अहिलेसम्मको अनुसन्धानका क्रममा घर धनिकाे गृह निर्माण कै क्रममा अकस्मात् स्वस्थ्यमा समस्या आउने र अचानक मृत्युको सम्भावना हुने गरेकाे अनुसन्धानका क्रममा देखिएकाे छ । आर्थिक भारपनि उच्च बिन्दुमा पुग्ने वास्तु शास्त्री हरुले जानकारी गराएका छन् । त्येसैले भुलेर उक्त दिशामा यी कार्यहरु गर्नु हुदैन
४ ग्रह निर्माणका क्रममा यदि पुर्वाे उत्तर अर्थात् ईशान काेणमा सेप्टि ट्याङ्की बनाईयाे भने यकिन मान्नुहाेस उक्त घरमा पेटकाे राेग तथा क्यान्सर लागेरै मानिसकाे मृत्युु हुने गरेकाे छ । कुबेरकाे निवास भूमिभएकाले पनि आर्थिक हिसाबले पनि अतिनै कमजाेर बनाउने वास्तु शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यी सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा ध्यान दिएर गृह निर्माण गरेमा उक्त भवनमा बस्ने मानिस हरुलाई संसारका सबै खाले सुख भाेगगर्न पाउने छन् भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रबार यस्तो काम गरेमा हुन्छ धन लाभ [हेर्नुहोस् ]:
साताको अन्तिम दिन अर्थाथ शुक्रबारलाई काम सुरु गर्दा राम्रो बारका रुपमा हेरिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार शुक्र ग्रह भोग९विलास, सांसारिक सुख, प्रेम, मनोरंजन, व्यवसाय, श्रीमतीको कारक ग्रह हो । त्यसैले आफ्नो श्रीमतीलाई कष्ट दिनु, कुनैपनि प्रकारको फोहोर वस्त्र लगाउनुले शुभ अशुभ फल दिने गर्छ ।
शुक्रवारको दिन यी कामहरु गर्नुहोस् राम्रो मानिन्छ । शुक्रवार दिन सेतो वस्त्र लगाउनुहोस् । शुक्रवार घरमा तुलसीको वृक्ष लगाएर पुजा गरेमा पनि राम्रो मानिन्छ ।
शुक्र, ग्रहमा सबैभन्दा चम्किलो र प्रेमको प्रतिक भएका कारण पनि यो बार सबै कुराले शुभ हुने धर्म शासत्रमा उल्लेख छ । जानकारहरुका अनुसार शुक्रवार दिन सेतो वस्त्र लगाउँदा निकै उत्तम हुन्छ । त्यस्तै शुक्रवार घरमा तुलसीको वृक्ष लगाएर पुजा गरेमा पनि राम्रो मानिन्छ ।
आजको दिनमा चाँदी, चामल, दूध, दही, सेतो चन्दन, सेतो वस्त्र कुनै पुजारीको श्रीमतीलाई दान गर्दा फलिफाप हुन्छ भन्ने विश्वास रही आएको छ ।
आजको दिन घर छाडेर बाहिर हिड्दा पनि सेतो चन्दनको टिका लगाउन शास्त्रले भनेको छ । शुक्रवारको दिन भोजनलाई जुठो बनाउनु अघि केही भाग गाईलाई पनि बाँड्न सकेको खण्डमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ |
Smita Bandari - September 22, 2020 0
सुन्दरता के हो ? रुपवती कसलाई भन्ने ? परी कस्ता हुन्छन् ? उत्तर थिइन्– सिरु । हँसिलो मुहार, गुलाबी ओठ, मोतीरूपी दन्तलहर र चम्किलो केशराशिले उनी यति राम्री देखिन्थिन्, लाग्थ्यो परीको अर्को रूप हुन् उनी ।
दुर्लव खुट्टा भएको नाग देवताको दर्सन गरि भेटि स्वरुप लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस धन लाभ हुने छ
कुमाखमा रहेको सिद्ध गुफा निकै रमणीय छ । स्थानीय बासिन्दा कर्ण चलाउनेले अवलोकन र पूजाआराधनाका लागि थुप्रै मानिस गुफामा आउने बताए ।